Brain Training 8.5.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 8.5.5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Brain Training
Brain Training ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ဦးနှောက်အတိုဝေါဟာရကိုမှတ်ဉာဏ်, အာရုံစူးစိုက်မှု, အာရုံ, အမြန်နှုန်း & တိကျမှန်ကန်မှုကိုအမြန်လေ့ကျင့်ခန်းမှဦးနှောက်သင်တန်းပေး app ကို။
ဒါကြောင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းဂိမ်း 15 အမျိုးအစားရှိပါတယ်။
◆ multitasking ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေး။
ဦးနှောက် Vs ◆အရောင်များ
◆မှတ်ဉာဏ်ကို Power သင်တန်း
◆လက်ဝဲဦးနှောက် Vs ညာဘက်ဦးနှောက်
◆ Grid မှတ်ဉာဏ်စိန်ခေါ်မှု
◆အာရုံစူးစိုက်မှု Plus အား
1) multitasking ကျွမ်းကျင်မှု: -
သင့်ဦးနှောက် multitasking စွမ်းရည် this.Questions ကစားခြင်းအားဖြင့်ကိုတိုးပှား2ပြားအတွက်တစ်ကြိမ်ပြသပါလိမ့်မည်။ သငျသညျအသီးအသီးအဆင့်တွင် max ကိုရမှတ်ရရှိရန်ကြိုးစားပါ .. 1 မိနစ်များတွင်မဆို panel ကိုပေါ်နှင့်အတူ3အခွင့်အလမ်းတွေကိုချွတ်ဖို့မစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်အဆင့်ကိုပြီးမြောက်ရန်ရမှတ်ပစ်မှတ်ထားရရန်ရှိသည် ..
အချိန်ကန့်သတ်မှုအတွက်အတူအနိမ့်အရေအတွက်မြင့်မားတဲ့အရေအတွက်ကိုကနေဘောလုံး this.Blast ကစားခြင်းအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှာဖွေသင့်ဦးနှောက်ကိုတိုးပှား။ တစ်ဦးချင်းစီကမှားကလစ်အပေါ်5စက္ကန့်ပင်နယ်တီ။
3) သင်္ချာကျွမ်းကျင်မှု: Add နုတ်, ပူဖောင်း solver အတွက်အစာရှောင်ခြင်းနံပါတ်များကိုများပြား။ ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမှန်ကန်သောအဖြေနှင့်အတူပူဖောင်းများ pop ရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်သင့်အာရုံစိုက်တိုးပေးရန်။ နံပါတ်လျင်မြန်နှုန်းနှင့်အတူပြသပါလိမ့်မည်။ နှိမ်အရေအတွက်ကအပေါ်ကိုအသာပုတ်ကြဘူး မှလွဲ. တိုင်းအရေအတွက်ကအပြီးမျက်နှာပြင်ကိုထိပုတ်ပါ။
5) အရောင် Vs ဦးနှောက်
အရောင်စာရင်းစက္ကန့်အနည်းငယ်နှင့်အရောင်များဘို့ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မည် shuffled ခံရပါလိမ့်မည်, ရောသမမွှေမတိုင်မီအပြည့်အဝအာရုံစူးစိုက်မှုချပြီးအားဖြင့်အရောင်များကိုသတိရနှင့်ပစ္စည်းများကိုဆွဲယူခြင်းဖြင့်တူညီနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုစီစဉ်
6) မှတ်ဥာဏ်ကို Power
သာစက္ကန့်အနည်းငယ်ဖော်ပြပေးသောအရာဝတ္ထုကိုသတိရပါနှင့်အတူတူပင် sequence ကိုအတွက်သူတို့ကို reenter ။
7) လက်ဝဲ Vs ညာဘက်ဦးနှောက်
လက်ဝဲနှင့်လက်ယာဦးနှောက်ကဒီဂိမ်းကစားခြင်း, အလွန်အရေးကြီးလှသည်ဟန်ချက်ညီ balancing လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်
သင်သည်သင်၏ရလဒ်များကိုကျေနပ်နေကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်နေ့စဉ် 5-10 မိနစ်ဒီဂိမ်း Play ။ သငျသညျပိုကောင်းရလဒ်တွေကိုမြင်ရလိမ့်မည်။
Brain Training အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Brain Training အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Brain Training အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Brain Training အား အခ်က္ျပပါ
discorally စတိုး 208 127.57k
Brain Training ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Brain Training အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 8.5.5
ထုတ်လုပ်သူ Triangles Labs
App Name: Brain Training
Release date: 2019-08-11 17:45:04
လက်မှတ် SHA1: EC:68:6E:AB:64:CB:A8:58:8E:64:4D:56:C6:E6:E5:C8:57:BC:4A:51
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Raghu
Brain Training APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ